DIEM izao ny mpikamban'ny marobe ny tetika sy ny teknolojia vaovao nampanantena miresaka ny scalability Bitcoin olana. Ny safidy hafa ahitana SegWit, Schnorr sonia, sy ny tselatra Network.
Ny DIEM protocole no miasa noho ny Bitcoin Lightning Network. Tselatra Network dia décentralisées rafitra izay mamela ny mpandray anjara mba hametraka trustless micropayment fantsona mba hampihatra didim-, eny-blockchain, fandoavam-bola iray na maro varotra.
Ireo fantsona monina ivelan'ny Bitcoin blockchain. Varotra hitranga eo amin'ny fantsona. Rehefa vita, ireo dia azo avy varotra, toy ny tokan-tena raharaham-barotra, ny blockchain.
Segwit lehibe iray hafa Bitcoin optimizer izay afaka manatsara ny scalability Bitcoin sy hampihena Bitcoin ny saram barotra. SegWit koa manampy hanatsara ny raharaham-barotra helatra Network malleability.
Koa satria ny fampahavitrihana SegWit tamin'ny volana Aogositra 2016, mpandraharaha efa kokoa fampidirana SegWit ho any Bitcoin mpanjifany, sy ny maro dia efa fampiharana fifanakalozana SegWit. Vao haingana indrindra, Febroary 5, 2018, Coinbase nanambara fa ny farany dia nanomboka dingana fitiliana ary Segwit ho azo Coinbase mpanjifa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
DIEM dia tetika iray hafa izay, niaraka tamin'i Tselatra Network, Mampanantena hanampy hamaha ny scalability Bitcoin olana. Bitcoin mafana fo sy ny mpampiasa vola mialoha fa DIEM handray fanohanana avy amin'ny mpandray anjara rehetra crypto sy handroso soa aman-tsara.
Inona araka ny hevitrao no Atomika Multi-Path vola noho ny helatra Network dia fiantraikany Bitcoin saram raharaham-barotra sy ny hafainganam-pandeha? Ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany.
Previous Post:Tsy ny rehetra ho tafita velona mpitrandraka fampihenana ny vola lany bitcoin
Next Post:Ahoana ny fandraràna ny dokam-barotra ao amin'ny Facebook crypto dia hanampy ny orinasa
Iomoio hoy i:
Aprily 24, 2018 amin'ny 6:48 AM